China Vented Seal Liner factory sy mpamatsy | 品牌 名 / 公司 名
Ny tombo-kase vented dia vita amin'ny sarimihetsika azo tsofina ary ny tombo-kase fampidirana hafanana (HIS) amin'ny alàlan'ny fantsom-pandrefesana ultrasonic na mafana, izay mahatratra tanteraka ny vokatry ny "miaina sy tsy misy mivoaka". Ny tombo-kase vented dia manana famolavolana tsotra, fividianana rivotra tsara ary fanoherana tsara ny surfactants. Ity vokatra ity dia novolavolaina mba hisorohana ny fitoeran-javatra famenoana (tavoahangy) tsy hohozongozonina na hapetraka amin'ny maripana isan-karazany mba hamokarana entona aorian'ny famenoana ranon-javatra iray, noho izany dia mihodina ny kaontenera na vaky ny siny tavoahangy.
Ny linered Vented dia fampisehoana onjam-peo tsara indrindra amin'ny indostria, ny safidy fanamoriana marobe dia manatanteraka ny filan'ny fampisehoana maro samihafa. Atolotra amin'ny sombin-javatra iray na savoka roa mifatotra am-pulp.
Ny plastika manidina dia mety amin'ny PET, PVC, PS, PP, PE… tavoahangy plastika sy tavoahangy fitaratra ary ampiasaina indrindra amin'ny sakafo, kosmetika, fanafody, fanafody famonoana bibikely, akora simika, fonosana vokatra entam-barotra.
Akora matevina: baoritra + Aluminium foil + Film plastika
Layer famehezana: PS, PP, PET, EVOH na PE
Hatezerana mahazatra: 0.2-1.2mm
Diameter mahazatra: 9-182mm
Ny membrane azo idiran'ny rivotra izay mampitovy ny tsindry ary manakana ny kaontenera tsy ho vaky, hianjera na hivoaka.
Ny famolavolana fanaovan-gazety tsy manam-paharoa dia miraikitra mora foana amin'ny alàlan'ny fametrahana azy amin'ny tanana na mandeha ho azy.
Betsaka ny haben'ny vent ary ny singa vonona hampiasaina izay manatsara ny fonosana tsy misy famolavolana.
1. Miaina ary tsy misy famoahana
2. Tena mora ny manokatra
3. Fisorohana ny famoahana be
4. Ahenao ny risika fanodinkodinana, fandotoana ary fandotoana
5. Manitatra fiainana talantalana
6. Mamorona tombo-kase hermetika
7. Sariaka amin'ny tontolo iainana
Manaraka: 3-Ply Foam Liner
Taratasy fanamafisana induction hafanana iray miaraka amin'ny fotsy ...
Tapa-kofehy fampidirana hafanana roa miaraka amin'ny taratasy ...
Tapa-kofehy fampidirana hafanana roa miaraka amin'ny "...